Halyeeyga Liverpool Phil Thompson: “Real Madrid Waa Sida Man City, Waana Arin U Fiican Liverpool” – GOOL24.NET
Halyeeyga Liverpool Phil Thompson: “Real Madrid Waa Sida Man City, Waana Arin U Fiican Liverpool”
Iyadoo toban maalmood ay ka harsan tahay finalka Champions League, halyeeyga Liverpool Phil Thompson ayaa wareysi siiyay jariirada Isbaanishka ee AS waana nin seddex jeer ku guuleystay koobka dhega weyne ee loo tartamaya 26ka bishaan May.
Isagoo ka hadlayay kooxda Real Madrid ee ay kooxdiisa Liverpool la ciyaari doonto 26ka bishaan waxa uu yiri: “Real Madrid ayaa loo arki doonaa kooxda ugu cadcad koobkaan, waa koox ku guuleysatay Champions League seddex jeer afartii sannadood ee u danbeysay.”
Isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu yiri: “Miyay u qalmeen inay garaacaan Bayern Munich? Maya, laakiin hab ay uga gudbaan ayay heleen. Kulankii Juventus waxa ay 3-0 ku soo badiyeen iyagoo marti ah, ka dib gurigooda ayay si xun ugu dheeleen waxaana lagu garaacayay 3-0, ka dib waxa ay heleen hab ay ku gudbaan iyadoo rigoore loo dhigay daqiiqadii u danbeysay, waxba igama gelin waxay dadku sheegayaan laakiin garsooraha cadaalad ayuu ahaa. Laakiin Real Madrid ayay aheyd midii heshay hab ay uga gudubto Juventus.
“Waana sababta ay tahay in looga baqo kooxaha sidaan oo kale ah laakiin anaga iyaga ayaanba dooneynaa inaan la ciyaarno. Real Madrid waa sida Manchester City, waa koox weerar ah, ma yaqanaan sida bas goolka loogu xirto, taasna waxa ay u fiican tahay Liverpool.
“Haddii aad aragtay kulamadii Liverpool iyo Manchester City, waxaan garaacnay City sannadkan seddex jeer. Qaabka ay u ciyaarto City ayaa u fiicneyd Liverpool, waxaana qabaa in Real Madrid ay la mid tahay.”
Finalka Champions League waxa uu dhici doonaa 26ka bishaan markaasoo kooxaga Real Madrid iyo Liverpool ay isaga horimaan doonaan magaalada Kiev ee caasimada Ukraine.